तिम्रो बुबाले के काम गर्नुहुन्छ? (२०७३ भाद्र १५, बुधवार)
जीवनका दैडाइहरुको क्रममा मलाई कहिले कहाँ त कहिले कहाँ कहिले को सग त कहिले को सग भेट हुन्थ्यो।
नया मानिसहरु सँग भेट हुदा प्राय हाम्रो दोहोरो परिचयबाट कुरा सुरु हुन्थ्यो भने कति ठाउँमा म एक्लैले मात्र परिचय दिनुपर्थ्यो। परिचयका क्रममा धेरै ठाउमा नाम ठेगाना वर्तमान पेसा बताइसके पछि एउटा प्रश्न आउथ्यो 'बाबाले के काम गर्नुहुन्छ? , तिम्रो बाबाले के काम गर्नुहुन्छ?'
अघिसम्म एकदम जोस्सीएर बोलेको मान्छे मलाई मौन बनाउथ्यो यही एउटै प्रश्नले। मैले एकछिन सोचेर मनलाई दवाएर नै भन्नुपर्थ्यो 'केही पनि गर्नुहुन्न !'
यो भनिसकेपछि उनिहरु फेरी सोध्थे 'त्यसो भए खेतीपाती गर्नुहुन्छ हैन त?' म यसको जवाफ पनि दिन सक्दैनथे किनकि उत्तर दिनासाथ फेरी प्रश्न आउने निश्चित हुन्थ्यो 'किन? त्यसो भए के गर्नुहुन्छ त?' तैपनि म जवरजस्ती भन्थे 'नाई !' यति कुरा गरिसके पछि कसैले सोच्थे यसलाई बताउने मन हैन्छ त कसैले सोच्थे घमण्डी मान्छे आफ्नो बाउको पेसा पनि बताउन नसक्ने त कसैले सोच्थे त्यसो भए सरकारी जागीरबाट अवकाश प्राप्त हुनुपर्छ अनि कसैले सोच्थे पक्कै यसको बुबा नै हैन्छ कि क्याहो, जे होस सबैले आफ्नै तरिकाले सोच्थे।मेरो यो चाला देखेर प्रश्नकर्ताहरु छक्क पर्थे र जान्न खोज्थे मेरो रहस्य।
म सानै छदा छाति फुलाएरै भन्थे "मेरो बुबा इन्डिया हुनुहुन्छ, इन्डियाको यो कम्पनिमा काम गर्नुहुन्छ।" जब म बढ्दै गए आठ, नौ कक्षामा पढ्ने भए तब म शिर ठाडो पारेरै भन्ने गर्थे, "मेरो बुबा किसान हो, मेरो बुबा खेतिपाति गर्नुहुन्छ"।
अनि जब म एघार, बाह्र, ब्याचलर पढ्न थाले, पढ्न/जागिर गर्नका लागी यताउता घर छाडेर हिड्न थाले त्यो बेलादेखि नै त्यो प्रश्न व्यापक उठ्न थाल्यो, सबैले पाइला पाइलामा सोध्न थाले तर त्यति बेलादेखि नै म अनुत्तरित हुन थाले।
मैले साथीहरु कहिले के भनेर टार्थे त कहिले के भनेर ढाट्थे।
मैले एकपटक एउटा कलेजमा भर्ना फर्म भर्दा फादर्स अक्कुपिएसन भन्ने ठाउमा LABOUR लेवर लेखेको थिए, त्यो पनि गल्ति/झुट विवरण दिएको हु, किनकी हाम्रो बुबाले न त कुनै फ्याक्ट्री, उद्योग मा नै काम गर्नुहुन्थ्यो न त कोही मालिक नै थियो उहाको त्यसैले उहालाई मजदूर भन्नु मेरो गल्ती थियो।
यस्तै एकपटक एउटा जागीरको लागी लिइएको अन्तरवार्तामा 'मेरो बुबा किसान हो भनेको थिए' तर वास्तवमा उहा त्यो बेला कुनै किसान हुनुन्थ्यो, न त खेती पाति गर्नलाई जग्गा नै थियो, नत पशुपालनका लागी कुनै सम्भावना थियो नत कुत, बटैया, अधिया गरेर खान नै पुग्थ्यो त्यसैले उहा किसान बन्न सक्ने कुनै आधार नै थिएन।
मैले साथीहरुको माझ म पनि के कम भनेर भए नभएको गफ लगाउथे, डक्टर, मास्टर, म्यानेजर, उद्योगपति, अधिकृत लगाएत आफूले जानेका सबै थोक एउटा सग एउटा अर्को सग अर्को भन्थे।
यसरी ढाटेर चल्दैन भन्ने सोचेपछि झन ठुलो तरिकाले ढाटेर भन्न थाले, 'मेरो बुबाले केही गर्नुहुन्न'।
मलाई थाहा छ मेरो बुबाले के काम गर्नुहुन्न? सबथोक गर्नुहुन्छ, सबथोक गर्न सक्नुहुन्छ। समाजमा भएका तल्लो वर्ग देखिका उपल्लो वर्ग सम्मका सबै काम गर्नुभयो, गर्नुहुन्छ र गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो बुवाले के काम गर्नुभएन? खेतीपाती पनि गर्नुभयो, देश छोडेर पनि काम गर्न जानुभयो, कुल्ली कामहरु पनि गर्नुभयो, विभिन्न कम्पनीमा मजदूरी पनि गर्नुभयो, आफैले विभिन्न व्यवसाय खोलेर आफै मालिक पनि बन्नुभयो।
तर जब त्यो प्रश्न व्यापक रुपमा उठ्न थाल्यो, त्यो बेलामा मेरो बुवा घरमा हुनुहुन्थ्यो, वरपर जे काम पर्यो, जसले बोलाए पनि यो यसको काम गर्दिन नभनि आफूले सक्ने र समय मिलेमा सबै गर्नुहुन्थ्यो। कुनै पनि कामलाई ठुलो सानो नभनि, आफ्नो कारणले कसैलाई बाधा नपर्ने गरी समाजको नैतिकता भित्र रहने हरेक काम गर्न तयार हुनुहुन्थ्यो। म उहालाई फिक्स एउटा यो काम गर्नुहुन्छ भनेर भन्ने कुरा नभएकाले त्यो प्रश्नले मलाई अड्काईरहन्थ्यो र अझै पनि अड्काईरहन्छ। आज त्यही भएर सबैलाई यही कुराको प्रस्ट जानकारी दिन चाहन्छु र यसै मार्फत तपाईलाई सोध्न चाहन्छु की- 'उहा लाई के काम गर्नु हुन्छ भनेर भन्दा उपयुक्त होला??'
मलाई यो कुराले धेरै ठाउमा दुख दिएको छ। मलाई यहि प्रश्नको उत्तर नमिलाउनालेले धेरै ठाउमा पछाडी पारिएको थियो, कति ठाउमा प्रवेश निषेध लगाइयो, कति ठाउमा हातैमा आएको जागीर फुत्कियो, कति छात्रवृत्तिका अवसर गुमेका थिए, कतिले मलाई होच्याएका पनि थिए। यस्तै धेरै ठाउमा अति दुख पाएको थिए।
तर कति ठाउमा यसै प्रश्नको उत्तरले छुट्टै सानका साथ, अवसरहरु हात पार्दै सफल समेत भएको थिए। तर अहिलेसम्म नी थाहा छैन यसको उत्तर के हो भनेर। त्यसैले म आफैले खोज्न थाले आखिर किन सोधिन्छ त यस्तो प्रश्न भनेर।
हरेक कुराको नाम दिदा उसको काम, उसको गुण हेरेर दिइन्छ॥ त्यसैले त्यसको नामबाट मात्र पनि धेरै कुरा जान्न सकियोस। त्यसैले नै होला गाउमा कसैलाई बोलाउदा पनि गाउतिर डाक्टर बा, लाहुरे बा, सुब्धार बा, मास्टर साहेब भन्ने जस्तो कुराले बोलाउछन्।
यदि तपाईले कसैलाई 'तिम्रो बुबाले के काम गर्नुहुन्छ' भनेर प्रश्न गर्नु भयो भने तपाईले यसप्रश्न बाट उसको बारेमा धेरै भन्दा धेरै जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुदो रहेछ।
जस्तै तपाईको घरको आर्थिक अवस्था, सामाजिक प्रतिष्ठा, पारिवारिक स्थिति, शिक्षाको स्तर लगायत सोध्नुपर्ने तथा जान्नुपर्ने अधिकांश कुराको जानकारी आउदो रहेछ।
जस्तै यदि उसले भन्यो, 'मेरो बुबा डाक्टर हो' यसबाट धेरै कुरा उसको घरको आर्थिक स्थिति राम्रो रहेछ, घर शिक्षित रहेछ, समाजले उपल्लो दर्जामा गन्दा रहेछन जस्ता अनुमान गर्न सकिन्छ र त्यो लगभग असि प्रतिशत मानिसमा नै मिल्न पुग्दछ। त्यसैले नै यो एउटा मास्टर प्रश्नको रुपमा धेरै मानिसले प्रयोग गर्दा रहेछन्। प्रश्नको उत्तर दिनेलाई पनि यी कुराको बारेमा थाहा हुदैन तर प्रश्न कर्ताले उत्तरबालालाई त्यो प्रश्न पछि छुट्टै नजरले हेर्न थालिसकेको हुदो रहेछ।
त्यसैले नै गर्दा मलाई व्यापक रुपमा यो प्रश्न सोधिएको रहेछ। तर म खोज्दै छु यसको एउटा यस्तो उत्तर जसले गर्दा साथीहरुले पनि बिशिष्ट नजरले हेरुन, जागीर खादा तथा अन्य हरेक अन्तरवार्ता लगायत केही कुरामा पनि पछाडी नपरिओस, विभिन्न ठाउमा पाइने सेवा सुविधाहरु पनि मिलोस। भनौ त साथी मैले के उत्तर दिदा ठिक होला???
अन्त्यमा आज बुबाको मुख हेर्ने दिन उहालाई सम्झदै सबैलाई बुबाको मुख हेर्ने दिन(father's day), कुशे औसी र मोति जयन्ती अबसरमा शुभकामना!!!
�लेखक:- पौडेल पदम प्रसाद
कपिलवस्तु (हाल धरान)
(कृषि इन्जिनियरिङ, चौथो बर्षमा अध्ययनरत)